दलाई लामाको समाचारले गोरखापत्र र राससका कांग्रेस निकट पत्रकारका जागरिक धरापमा, सोधियो स्पष्टीकरण – MediaNP
काठमाडौं, ३० वैशाख । सरकारी मिडिया गोरखापत्र र राष्ट्रिय समाचार समिति (रासस) मा दलाई लामा आतंक मच्चिएको छ । जसका कारण दुवै संस्थामा कार्यरत आधा दर्जन पत्रकारको जागिर धरापमा परेको छ ।
निर्वासित तिब्बती धर्मगुरु दलाई लामा गत साता बिरामी भएको समाचार अन्तर्राष्ट्रिय मिडियामा आयो । यही समाचार राससको वैशाख १४ गतेको बुलेटिनमा छापियो । राससले दिएको उक्त समाचार प्रायः सबै दैनिक अखबारले प्रकाशित गरे ।
रासस र गोरखापत्रमा अहिले यही समाचारले कांग्रेस निकट पत्रकारको जागिर धरापमा परेको छ । गोरखापत्रको अन्तर्राष्ट्रिय पेज हेर्ने सम्पादक शम्भु प्रसाईले उक्त समाचार फाइनल गरी पेजमा राखिसकेका थिए । प्रेस चौतारीका पूर्वउपाध्यक्ष तथा प्रबन्ध सम्पादक श्रीधर आचार्यको उक्त समाचारमा आँखा पुग्यो । उनले केहीबेर कसैलाई फोन गरे । माथिको आदेशपछि उक्त समाचार पेजबाट हटाइयो ।
तर मामिला यतिमा मात्रै टुंगिएन । उक्त समाचार पेजमा राख्ने प्रयास गरेबापत शम्भु प्रसाई कोपभाजनमा पर्ने सम्भावना बढेको छ । यही निहुँमा प्रसाईलाई संस्थानको बोर्ड सदस्यबाट हटाएर श्रीधर आचार्यलाई ल्याउने गृहकार्य सूचना प्रविधि मन्त्रालयले गरेको छ ।
गोरखापत्र संस्थानको ११९ औं वार्षिकोत्सवको अवसरमा भाषण गर्दै मन्त्री बास्कोटाले भने– ‘सरकारी संचार माध्यमा दलाई लामाको समाचार प्रकाशित गर्ने प्रयास गरेको कुरा मैले सुने, नेपालले एक चीन नीति लिएको छ, दलाई लामाको अस्तित्व स्वीकार गरेको छैन, त्यसैले यो समाचार लेख्नेलाई देशद्रोहको मुद्दा लगाइदिए हुन्छ ।’ सरकारी निकाय राससले प्रकाशित गरेको समाचार सरकारकै अर्को संस्था गोरखापत्रमा प्रकाशित गर्न नमिल्ने भन्ने हुँदैन ।
त्यसैले राससका अन्तर्राष्ट्रिय समाचार डेक्सका पत्रकारहरूमाथि आस्थाका आधारमा कारबाही अघि बढाउने तयारीसहित स्पष्टीकरण सोधिएको छ । स्पष्टीकरण सोधिने पत्रकारमा सोमनाथ लामिछाने, मोहनी रिसाल र जीवन भण्डारी छन् ।
उनीहरूलाई सोधिएको स्पष्टीकरणमा भनिएको छ– ‘दलाई लामा चीनका देशद्रोही नेता हुन् भन्ने हेक्का किन राखिएन, यस्तो समाचार सरकारी संस्थामा प्रकाशित हुँदा नेपाल र चीनबीचको सम्बन्ध बिग्रन्छ भन्ने हेक्का किन राखिएन ? जानाजान यो समाचार प्रकाशित गरिएको होइन भन्ने आधार के छ ?’
अन्तर्राष्ट्रिय समाचार डेक्सको जिम्मेवारीमा बसेका चारजनामध्ये तीनजना नेपाल प्रेस युनियन निकट हुन् भने अर्का एकजना प्रेस चौतारी निकट हुन् । प्रेस चौतारी निकटका पत्रकारलाई भने स्पष्टीकरण सोधिएको छैन । युनियन निकटका उनीहरूलाई बोर्ड सदस्य डिल्लीराम भट्टराईले स्पष्टीकरण सोधेका हुन्, जबकि त्यो अधिकार अध्यक्ष वा जीएमसँग मात्र त्यो हुन्छ ।
नेपाल आइडल २’ का फस्ट रनरअप विक्रम बरालले गरे विवाह
के तपाई सधै सुखी र खुसी जीवन बिताउन चाहनुहुन्छ ? अपनाउनुहोस् माता सिताको यी ५ कुरा !